‘मिसेस मंगोल नेपाल’को उपाधि बौद्धकी अञ्जुलाई « Drishti News – Nepalese News Portal
‘मिसेस मंगोल नेपाल’को उपाधि बौद्धकी अञ्जुलाई
७ श्रावण २०७८, बिहिबार २ : ५३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ‘मिसेस मंगाल नेपाल’को उपाधि अञ्जु शेर्पाले जितेकी छन् । अमेजन इन्टरटेन्मेन्टले आयोजना गरेको यो सातौँ कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण ब्रोडकास्टिङ एडिसन टिभीशोमार्फत गरिएको थियो ।
प्रतियोगिताको फाइलनमा प्रमुख निर्णायक डा. रेखा थापाले गरेको प्रश्नमा उत्कृष्ट उत्तर दिँदै अञ्जुले ‘मिसेस मंगोल नेपाल–२०२१’को ताज जितेकी हुन् । ताज आफ्नो पोल्टामा पारेपछि बौद्धकी अञ्जुले भनिन्, ‘आज निकै खुसी छु ।’
त्यस्तै, प्रतियोगितामा हिरा शेर्पा फस्ट रनरअप र निशा थापा मगर सेकेन्ड रनरअप भएका छन् । थर्ड रनरअप सोभा मगर र गौरी लामा फोर्थ रनरअप भए । १५ प्रतियोगीमध्ये विभिन्न चरणबाट छनोट हँुदै टप पाँचलाई मात्र फाइनलमा उतारिएको थियो ।
हिमानी सुब्बाको कोरियोग्राफीमा सम्पन्न प्रतियोगितामा डा. रेखा थापाका अलावा माया लामा, ब्युटिसियन नेपालकी हेमा पुन मगर र मिसेस आईकन नेपाल सोनिया ज्याखो थिए । सो कार्यक्रमलाई मोडल दिक्पाल कार्कीले सञ्चालन गरेका थिए ।